समाचार - कसरी रखरखाव र लिफ्टिंग चेन मर्मत गर्न?
१. त्यहाँ कुनै तिर र स्विंग हुनुहुँदैन जब sprocket शाफ्ट मा स्थापित छ। एउटै प्रसारण विधानसभा मा, दुई sprockets को अन्तिम अनुहार एउटै विमान मा हुनु पर्छ। जब sprockets को केन्द्र दूरी 0.5m भन्दा कम छ, स्वीकार्य विचलन 1mm छ; जब sprocket को केन्द्र दूरी 0.5m भन्दा बढी छ, स्वीकार्य विचलन 2mm छ। जे होस्, कुनै घर्षण sprocket दाँत को पक्ष मा अनुमति छ। यदि दुई पाels्ग्रा धेरै धेरै सार्छन्, यो सजीलो श्रृंखला विभाजन र छिटो लगाउने कारण हो। जाँच गर्नुहोस् र अफसेट समायोजन गर्न ध्यान दिनुहोस् जब sprocket को प्रतिस्थापन।
2. यदि यो धेरै तंग छ, बिजुली को खपत बढाइनेछ र असर सजीलै लगाईनेछ; यदि धेरै ढीलो लिफ्टिंग श्रृंखला उफ्रन र बन्द गर्न सजिलो छ। लिफ्टिंग चेन को तंगता छ: लिफ्ट वा चेन को बीच बाट प्रेस, दुई sprockets को केन्द्र दूरी को बारे मा २% - ३% छ।
३. प्रयोग भएको उठाउने चेन केहि नयाँ चेनहरु संग मिश्रित गर्न सकिदैन, अन्यथा यो प्रसारण मा प्रभाव उत्पादन गर्न र चेन तोड्न सजिलो छ।
4. को गम्भीर लगाउने पछि sprocket, नयाँ sprocket र नयाँ चेन राम्रो meshing सुनिश्चित गर्न को लागी एकै समयमा प्रतिस्थापन गर्नु पर्छ। यो नयाँ श्रृंखला वा sprocket अलग बाट प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छैन। अन्यथा, यो खराब meshing कारण हुनेछ र नयाँ चेन वा sprocket को लगाउन को गति। पछि sprocket दाँत सतह एक निश्चित हदसम्म लगाएको छ, यो समय मा पल्टनु पर्छ (समायोज्य सतह संग sprocket लाई जनाउँछ)। उपयोग समय विस्तार गर्न।
5. नयाँ लिफ्ट चेन धेरै लामो वा प्रयोग पछि, जो समायोजित गर्न गाह्रो छ। चेन लि the्क स्थिति अनुसार हटाउन सकिन्छ, तर चेन लि number्क नम्बर पनि हुनुपर्छ। चेन लि the्क चेन को पछाडि बाट पारित हुनेछ, ताला टुक्रा बाहिर सम्मिलित गरिनेछ, र ताला टुक्रा को उद्घाटन रोटेशन को विपरीत दिशा मा हुनेछ।
6. लिफ्टिंग चेन समय मा स्नेहन तेल संग भरीनु पर्छ। स्नेहन तेल रोलर र भित्री आस्तीन को बीच मा काम को स्थिति मा सुधार र लुगा कम गर्न को लागी फिट निकासी मा प्रवेश गर्नु पर्छ।